Mamarana hatrany ny minisitra: ny sidina manelanelana an'i Papua New Guinea sy Kiribati
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mamarana hatrany ny minisitra: ny sidina manelanelana an'i Papua New Guinea sy Kiribati
Ny Minisitry ny Fitaterana ao Kiribati dia mifampiraharaha momba ny sidina mivantana eo amin'i Papua New Guinea sy Kiribati.
Mandeha ny fifampiraharahana ao amin'ny Hotel Gateway Port Moresby amin'izao fotoana izao mba hisian'ny fifanarahana vita sonia sy hapetraka.
Ny Agendas izay niresaka momba io maraina io dia nahitana ny volavolan-dahatsoratra fifanarahana PNG-Kiribati Air Services ho an'ny fiaraha-miasa sy ny fanekena, ary ny famantarana ireo teboka miasa ho an'ny andaniny sy ny ankilany ho an'ny fifanatonana sy ny fanekena.
Ny dinika dia mijery ny fahafaha-mampiasa ny Federated States of Micronesia ho mpanelanelana amin'ny fifanarahana.
"Na inona na inona ho izy io, ny iray manokana horesahina eo amin'ny seranam-piaramanidina roa anay," hoy ny sekreteran'ny departemantan'ny fitaterana, Roy Mumu.
Ny antontan-taratasin'ny fifanarahana dia hosoniavin'ireo minisitry ny fitaterana roa tonta aorian'ny fifanakalozan-kevitra sy ny valin'ny dinika androany maraina.
Hatreto, PNG dia manana fifanarahana serivisy an'habakabaka 14 miaraka amin'ireo toekarena APEC isan-karazany, ao anatin'izany ireo firenena nosy Pasifika mpifanolo-bodirindrina aminy toa ny Nosy Solomon, Fiji, Vanuatu ary mazava ho azy Australia sy New Zealand.
Ny fifanarahana farany natao teo amin'ny FSM izay manamora ny sidina roa isan-kerinandro dia nataon'ny Air Niugini.
“Ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa dia hitarika amin'ny fanaovan-tsonia fifanarahana serivisy ho an'ny serivisy, ary io ihany koa no voalohany amin'ireo dinika maro ho avy; antenaina fa mitarika zavatra mivaingana izay ahafahana manatsara ny fifandraisan'ny rivotra amin'ireo firenena nosy Pasifika, "hoy i Mumu.
Ny famaritana rehetra ny fifampiraharahana dia hovitaina anio alina arakaraka ny valin'ny fifampiraharahana androany amin'ireo solontenan'ny serivisy avy any Kiribati.
Mandritra izany fotoana izany, talen'ny sidina fiaramanidina sivily, Aako Teikake, dia nisaotra ny Governemanta PNG noho ny fanekeny an'i Kiribati tamin'ny famolavolana ny fifanarahana serivisy ho an'ny rivotra, izay tena ilaina amin'ny fanitarana ny fifandraisan'ny Air Kiribati amin'ny alàlan'ny fitondrana.
"Manantena izahay fa hanana valiny tena mahasoa sy mahomby," hoy izy.
Manana toerana vaovao ny Birao Mpitsidika an'i Samoa Amerikanina